UKWENZA OKWENGEZIWE - I-Chapman Technology Co, Ltd.
Umshini wokugaya we-CNC ngumshini wokugaya amandla nge-CNC (Computer Numerical Controlled) isilawuli, esisetshenziselwa ukugaya ubujamo be-2D / 3D noma amaphethini ezintweni ezahlukahlukene. I-CNC milling iyindlela ye-CNC machining efana nokuqopha nokusika, futhi ikwazi ukufeza imisebenzi eminingi eyenziwe ngokusika nokuqopha imishini. Njengokubaza, ukugaya isebenzisa ithuluzi lokujikeleza elijikelezayo. Kodwa-ke, ithuluzi esigayweni se-CNC liyakwazi ukuhamba ngama-axis amaningi, futhi lingakha ubujamo obuhlukahlukene, izikhala nezimbobo. Ngaphezu kwalokho, i-workpiece ivame ukuhanjiswa kulo lonke ithuluzi lokugaya ngezindlela ezihlukile. Ukuze uzuze isimo semakethe esiningi, UMenzi weChapmaninkampani ngokuqhubekayo izimali ngesivinini CNC ukucutshungulwa imishini. Sinamasethi ama-4 wemishini yokucubungula iMAKINO evela eJapane, ukunemba kwayo kungafinyelela ku-0.005-0.01mm.
Ngaphezu kwalokho, futhi sinemishini engu-4 ye-CNC yokuqedela kabili kanye nokushaya okungu-2.
UMenzi weChapmanImishini yokucubungula i-CNC ingahlangabezana nazo zonke izidingo zakho zokucubungula, hhayi ukufakwa kwesikhunta kuphela, izikhala zesikhunta, izingxenye zesikhunta, kepha futhi singanikeza ngezinsizakalo zemishini ye-CNC ngobuningi bezingxenye zamakhasimende athile ezisebenzelayo.
Imishini yokukhipha ugesi (i-EDM), eyaziwa nangokuthi yi-“spark” machining, ubuchwepheshe obusunesikhathi eside bukhona. Ngesikhathi senqubo ye-EDM, amandla kagesi aqondiswa ukuba adlule phakathi kwe-electrode nento yokusebenza ehlukaniswe uketshezi lwe-dielectric, olusebenza njengesivikelo sikagesi. Lapho nje kusetshenziswe amandla aphezulu ngokwanele, oketshezi lwe-dielectric luyakhishwa futhi luguquke lube ngumqhubi kagesi bese kugugula umsebenzi ngokukhipha ukukhishwa kwe-spark ukuyibumba ibe yifomu oyifunayo noma isimo sokugcina.
Lapho usebenza ngaphakathi kokubekezelelana okuqinile okudingekayo embonini yeMold, kubalulekile ukufaka imishini efanele. I-EDM (Umshini Wokukhishwa Kukagesi) Imishini yokusika izintambo esebenza ngokubambisana nezazi zethu zemishini eqinisekisiwe nomnyango wezobunjiniyela, inikezela Ngokukhiqiza Okujwayelekile ngobunono obudingekayo ukuze kusebenze kulo mkhakha.
Ukugaya kuyinqubo yokwenza imishini usebenzisa abasiki bokujikeleza ukuze ususe okokusebenza ngokuqhubekisela phambili umsiki abe ucezu lomsebenzi. Lokhu kungenziwa ngokuhlukahluka okuhlukile ku-eksi eyodwa noma eziningana, isivinini sekhanda lokusika, nengcindezi.
Kwabanye isikhunta ngokunemba, ukunemba elimetjhako Ukufaka yethu, ophakamisa, isinciphisi, nezinye izingxenye kwesakhiwo isikhunta kubaluleke kakhulu. Ngokuvamile, ukucubungula ukucubungula kwe-grinder yethu kudinga ukuba ngaphakathi kwe-0.005mm.
Fit isikhunta kanye Assembly:
Kunamaqembu ayi-8 ku-workshop yethu yomhlangano wesikhunta. Amaqembu ayisihlanu esikhunta abhekele ukukhiqizwa kwesikhunta sokuthekelisa, kanti amanye amaqembu amathathu ahlelelwe isikhunta somndeni wethu.
Ngemuva kokuthi isikhunta kufanelekile isikhunta sesiqediwe, sidinga ukusindisa isikhunta bese siyipholisha. Qinisekisa ukuthi ikhwalithi yesikhunta ingahlangabezana nezidingo zokuhlola ngokushesha okukhulu.